Xuska 1-da Luulyo oo lagu qabtay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika – Radio Muqdisho
Xuska 1-da Luulyo oo lagu qabtay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika
Xaflad si heer sare ah loosoo agaasimay, laguna maamuusayay 1-da Luulyo iyo israacii Gobolada Waqooyi iyo Koonfur ayaa lagu qabtay Magaalada Pretoria ee Dalka Koonfur Afrika.
Xafladan oo ay qabanqaabiyeen Ururka Dhallinyarada Soomaaliyeed ee magalaadaasi ayaa waxaa ka soo qeybalay xubno ka socday Safaaradda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika, Ganacsato, dhallinyarro iyo haween oo qaarkood ku asqeysanaa dharka Calanka Soomaaliya, waxaana Xafladaasi qudbado ka jeediyay qaar ka mid ah kasoo qeybgalayaasha ayaa ka sheekeyay habeenkii weynaa ee israaca labada Gobol.
Abuukar Cabdi Guddoomiyihii hore Jaaliyadda Soomaaliyeed SASA ee Gobolka Kwazulu Natal oo ka hadlay madasha Xaflada ayaa yiri. “Waa Xafladdii Xoriyadda Soomaaliya 1-da July ee waa lagu qasbanyahay inuu kasoo qeybgalo, Umadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inuu qof walba ka qeybqaato”
Cabdullahi Xuseen Jirdi oo isna ka hadlay ayaa hambalyo u diray Madaxda Qaranka iyo guud ahaa Ummadda Soomaaliyeed waxaana uu yir, “Waxaan hambalyo halkaan ugu direynaa Madaxdeenka Qaranka Soomaaliyeed, qaas ahaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, Mudane Xasan Sheikh Maxamuud, Gudoomiyaha Barlamaannka Mudane Jawaari iyo Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid waxaan leeyahay Calanka Soomaaliya dad baa u soo dhintay dad baa halkaan soo gaarsiiyay, idinkane ballan baad qaadeen iyo mideyntii dhallinyarada aad kaga saareysiin Shabaabka oo aad waxbarashada ku hogaaminaysiin inaad u istaagtiin”
Sidoo kale Guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada Bashiir Maxamed Goobe oo ka mid ahaa qabanqabaayasha oo isna qudbad ka jeediyay ayaa u mahadceliyay dadkii kasoo qeybgalay oo ay Safaaraddu ugu horeyso isagoo dhinac kala la dardaarmay dhallinyarada.
“Waxaa fiican in la fikiro meesha aan joogno ma ahan gurigeena Wadankeena sidaan ugu laaban laheen oo aan u dhisan laheen,kana an joogno aan ugu midoobi laheen inaan ka shaqeynayo waaye”
Ugu dambeyntii waxaa soo gabagabayeey Xafladan lagu maamusayay 1-da Luulyo ayaa waxa uu ka hadlay taariikh ku saabsan ahmiyadda ay leedahay habeenkan qiimaha badan.
“Safaaradda Soomaaliyeed gadaal ayay ka riixaysa Barnamaijkaan laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed baa samaysatay Barnaamijkaan,waa inaan maalmahan xususidda mudan aan u dabaaldagnaa”
Intii ay Xafladda socotay ayaa waxaa sidoo kale dhallinyarada soo bandhigeen Riwaayad aad u soo jiidatay kasoo qeybgayaalasha waxa ay Xafladda kausoo gabagabowday jawwi aad u wanaagsan.
C/qaadir Axad Warbaahinta Qaranka,Pretoria
Bisha Cas Imaaraadka oo deeq afurin ah gaarsiisay Qoysas danyar ah “SAWIRRO”
Madaxweynaha oo afur iyo casho sharaf u sameeyay goleyaasha safiiro, biladana guddoonsiiya Wasiirka warfaafinta iyo Taliyaasha Ciidamda, “SAWIRRO”
Madaxweynaha oo afur iyo casho sharaf u sameeyay goleyaasha safiiro, biladana guddoonsiiya Wasiirka warfaafinta iyo Taliyaasha Ciidamda, "SAWIRRO"